I-LG G7 uqobo yethulwe ku-MWC, kepha ngasese | Izindaba zamagajethi
Abaningi bethu baphuthelwa okuthile ngesikhathi se-Mobile World Congress, ukuqokwa ne-LG nokusebenza kwayo okuphezulu emsebenzini. Iqiniso ukuthi i-LG G6 ne-LG V30 zingaphezu kwalokhu okusezingeni eliphezulu okufunwa ngocingo lweselula kokubili ezingeni lokuklama nasezingeni lehadiwe.
Yiba ngangokunokwenzeka, Olunye ulwazi luye lwenzeka ngalo luvela ohlotsheni lwesethulo lwedlanzana elinenhlanhla lapho i-LG ibavumela ukuthi babone izibonelo zalokho okuzoba izingcingo zalo ezahlukahlukene ephezulu ngo-2018, ake siyibheke.
Inkampani yaseKorea ebizwa nge-LG G7 Neo. Ngokolwazi olwabiwe ngozakwethu Xakata Ucingo alukaze lunikezwe ubukhazikhazi obudingekayo ngoba sibhekene nesibonelo esingaqediwe, futhi ngokufanayo asisoze sabona ukukhanya ngoba ehlobo kuzothathwa indawo yidivayisi ye-LG Judy, ezoshaya emashalofini. Abafana be Ynet Balayishe ividiyo lapho ungabona khona lokhu okucatshangwa ukuthi yi-LG G7 Neo embukisweni osendaweni efihlekile eMWC lapho bekukhona kuphela abezindaba nabathize. I-LG ibukeka ishaya umgwaqo ezingeni leselula futhi asazi ngempela ukuthi kungani, ngoba amadivayisi ayo asezingeni eliphakeme.
Kodwa akazange eze yedwa, ngoba wayehamba nomfowabo i-LG V35 kanye ne-smartwatch ene-Android Wear. Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, inguqulo "eshibhile" yale LG G7, okungaba yi-LG Q7, kwakungomakhelwane. Vele, ifoni iphumelele impela futhi ama-logo we-LG ayabonakala kumalebula ombukiso, kuyilapho kuma-prototypes akhonjisiwe awasenzi sicace umsuka wawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-LG G7 yethulwe ku-MWC, kepha ngasese
I- "notch" ku-MWC noma impi yokukopisha kuze kube nokukhubazeka